Bogga ugu horeeya ee goobta intarnat-ka / Anigu waxaan imi iyadoo waalid ila socon / In magan-gelyo laga raadsado Iswiidhan / Ka hor intaanad iman Iswiidhan
Dheeraad ku saabsan in magan-gelyo laga codsado gudaha Iswiidhan ka akhri bogga Hey'ada Socdaalka. Warbixintan waxaa lagu helayaa iswiidhish iyo ingiriisi.
Haddii mid ka mid ah qodobadani sax yihiin markaasi badanaaba Iswiidhan mas'uulka kama aha codsigaaga magan-gelyo.
Codsigaaga magan-gelyo si kastaba ha ahaatee waxaa lagu eegi karaa Iswiidhan, haddii codsigaagi aad magan-gelyada kaga codsatay dal kale aan lagu eegin, ama haddii aanad helin wax go'aan ah dhinaca codsiga magan-gelyo ee aad ka samaysay dal kale.
Haddii aad qoys ama ehel ku leedahay gudaha Iswiidhan waxay Hey'ada Socdaalka go'aamin kartaa in codsigaaga magan-gelyo lagu eego Iswiidhan. Hey'ada Socdaalka waxaa kale oo ay dalban kartaa in codsigaaga lagu eego dal kale oo ku yaala Yurub, haddii aad qoys ama ehel ku leedahay dalkaasi oo Hey'ada Socdaalka ay la tahay in dantaadu kuugu jirto inaad kuwaasi la joogto.
Akhri dheeraad ku saabsan Heshiiska Dublin oo ku qoran Hey'ada Socdaalka bogeeda. Warbixintan waxaa lagu helayaa iswiidhish iyo ingiriisi.
Aabka Miniila – Taageerada la siiyo caruurta iyo dhalinyarada soo qaxay
Miniila waa aab aad ka heli karto caawimaad inta aad ku jirto safarka aad ugu soo qaxday Yurub. Aabkan waxaa ku jira macluumaad ku saabsan halka aad ka heli karto caawimaad laga bilaabo cunto iyo daryeelka bukaanka ilaa iyo talo-bixin sharciyan ah goobta aad joogto. Aabkan waxaa xitaa ku jira macluumaad ku saabsan xuquuqdaada iyo faayraska koroona. Waa bilaash oo sahlantahay in la isticmaalo oo macluumaadkaaga shakhsiga ah way dhowrsanyihiin.
Aabka Miniila waxaa lagu helayaa luuqadaha Carabida, Faarsi, Tigrinya, Faransiis iyo Ingiriisi.
Missing Children Europe waxay sameeyeen filim ku saabsan aabka Miniila. Filimkan waa Ingiriisi. Wuxuu leeyahay qoraalo xagga hoose ah oo ah Ingiriisi, Carabi, Faarsi, Faransiis iyo Tigrinya.
Akhri dheeraad oo aabka ka soo dejiso bogga intarnatka ee Miniila.